1 >> Category: ဘဏ်များ
- စိန့်ပီတာစဘတ်မှာ "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Tehnohimbank" ဆိုတဲ့ 1989 ၏အစအဦးဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဘဏ်မှတှငျမှတျတမျးတငျထား ဘဏ်ကို "အလက်ဇန်းဒါး" အသက်အကြီးဆုံးရုရှားဘဏ်တွေတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏ပထမဦးဆုံးရှယ်ယာရှင်များဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းခဲ့ကြ, Boris Gidaspova အကျိုးစီးပွား, အလီနင်ဂရက်ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီဟောင်းပထမဦးဆုံးအတွင်းရေးမှူး၏နယ်ပယ်၌ရှိ၏။ နောက်ခံ: OJSC "ဘဏ်ကို" အလက်ဇန်းဒါး" လိုင်စင်№ 53 ခေါင်းဆောင်: ဆာဂေး Grigoriev ခုနှစ်တွင် သတင်းအချက်အလက် 02.
ဘဏ်ကိုလည်း "ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်" Faba "ဘဏ်၏" ဟုအမည်အောက်တွင်ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1994 ခုနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ 2001 ခုနှစ်, အကြွေးအဖွဲ့အစည်းလာမည့်ရှစ်နှစ်ဘို့စောင့်သော "ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးဘဏ်၏" ၏နာမကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အနာဂတျတှငျ, ဘဏ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 2009 ခုနှစ်ဧပြီလအတိအကျပိုင်ရှင်တွေဟာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု၏လမ်းညွန်တယောက်, ဘဏ်ထင်ဟပ်ခြင်း, နာမကိုပေးစေခြင်းငှါဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်─ "ရုရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ", ဒါပေမယ့်ဖောက်သည်များ၏လူကြိုက်များဝယ်လိုအားများကကို process နှင့် ဆက်စပ်.
2012 ခုနှစ်သြဂုတ်လ & nbsp မှ AKB "အသံထွက်";
AKB အကြွင်းမဲ့အာဏာဘဏ်မှ OJSC 1993 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဓိကရှယ်ယာရှင် - ပွင့်လင်း Joint Stock Company မှ "ယူနိုက်တက်ခရက်ဒစ်စနစ်" ကိုက Non-State ပင်စင် "လူမှုဖူလုံရေး" ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း IFC ကကမ္ဘာ့ဘဏ​​်၏ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍလက်မောင်းကို 2005 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ "Absolute" ၏ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည် , 10 & nbsp အတွက် 7.
ဘဏ် & nbsp, 1990 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့;
ဘဏ်သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရထိန်းချုပ်သော, ဇန်နဝါရီလ 2002 ခုနှစ်တွင်အဇာဘိုင်ဂျန်၏-Azerbaijani နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းကိုမျှော်လင့်မယ်လို့အဖြစ်ဘဏ် "IBA-မော်စကို" ၏အဓိကတာဝန်များကို, ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်မိဘဘဏ်များ၏အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြု, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရုရှားနှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်အကြားစီးပွားရေးဆက်ဆံမှု, နိုငျငံ၏ကအတွင်းနေထိုင်ရုရှားဝန်ဆောင်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြစ်ကြသည်။ အလှည့်၌, 50,2% ကိုသမ်မတနိုငျငံ၏အစိုးရကပိုင်ဆိုင်သောအရာ, အဇာဘိုင်ဂျန်၏နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိုထိန်းချုပ်ထားဘဏ် 100%, ။ နောက်ခံ: LLC သည် "ဘဏ်၏" IBA-မော်စကို" လိုင်စင်№ 3395 ခေါင်းဆောင်: Fuad R.
ဘဏ်နာမည် "ကုမ္ပဏီ" KB "Kostromabiznesbank" အောက်မှာနှောင်းပိုင်းတွင် 1990 ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ 2003 ခုနှစ်တွင် "အ axon ဥ​​ီးပိုင်က" အကြွေးအဖွဲ့အစည်းကုမ္ပဏီရဲ့ "သမဝါယမ" Aksonbank အမည်ပြောင်းခဲ့သည့်နောက်, ဘဏ်များ၏ရှယ်ယာမြို့တော်၏ 100% ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ " စတုတ္ထဘွဲ့နှင်းသဘင်၏နိုင်ငံတော် Duma, ပါတီ Kostroma တိုင်းဒေသကြီး, CJSC "axon ဥ​​ီးပိုင်" Andrey Ozerov ၏ပိုင်ရှင်မှာ "တရားမျှတသောရုရှားနိုင်ငံ" ၏ဒေသဆိုင်ရာဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌ၏လက်ထောက်အဖြစ်ဘဏ်ပြုမူသောအမှုသာပိုင်ရှင်။ နောက်ခံ: LLC သည် "ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်" Aksonbank ဘဏ်မှ" လိုင်စင်№ 680 ခေါင်းဆောင်: Gomzelev က Denis Nikolaevich ခုနှစ်တွင် သတင်းအချက်အလက် 23.